Myanmar: Faha-150 taona nananganana an’i Mandalay · Global Voices teny Malagasy
Myanmar: Faha-150 taona nananganana an'i Mandalay
Voadika ny 18 Mey 2009 19:54 GMT
Vakio amin'ny teny Français, Nederlands, Español, বাংলা, English
Mankalaza ny faha-150 taonany mandritra ny telo andro manomboka amin'ny 14 ka hatramin'ny 16 mey i Mandalay, renivohitry ny fitondram-panjaka farany.
Fankalazana ny faha-150 taona an'i Mandalay
Renivohitry ny faritanin'i Mandalay i Mandalay (he!he!) sady tanàna faharoa lehibe indrindra any Myanmar.
Nosoratan'i Ye Lwin Oo tao amin'ny bolongany ny tantara nahatonga ny fanorenana an'i Mandalay:
Manana lovan-kolontsaina betsaka i Mandalay fantatra ihany koa amin'ny anarana hoe Yadanabon, ary araka ny tantara dia naorin'ny Mpanjaka Mindon tamin'ny taona 1857, ary mijoro ho renivohitra farany tamin'ny fotoanan'ny faha-mpanjakan'i Myanmar.
Naorina tamin'ny toerana foana i Mandalay tamin'ny taona 1857, satria, araka ny voalazan'ny faminaniana fahagola, eo amin'io toerana io indrindra dia hsy tanàna hitsangana mandritra ny jobily faha-2 400 taonan'ny Boddhisma.
Nanapa-kevitra ny hanatontosa io faminaniana io ny Mpanjaka Mindon ary nandritra ny fotoana nanjakany tao amin'ny Fitondrana entim-panjakan'i Amarapura no namoahany ny didin'ny panjaka tamin'ny 13 Janoary 1857 hanaganana fitondrana entim-panjaka vaovao. Nankalazaina tamin'ny volana Jolay 1858 ny fanandratana ny seza fiandrianana. Nofaritana ny faritry ny tanànan'ny mpanjaka sy ny faritry ny fanjakana. Ny tanànan'ny mpanjaka manontolo dia nantsoina hoe Lay Kyun Aung Mye (”Tany Nandresena ny Nosy Efatra”) ary ny lapam-panjakana kosa, Mya Nan San Kyaw (”Lapan'Emeraodan'ny Mpanjaka”). Ny fanjakana dia nantsoina hoe Fanjakan'i Yadanabon, miaraka amin'ny anarana hafa hoe Ratanapura, izay midika hoe “Toerana miravaka vatosoa”. Nantsoina hoe Mandalay taty aoriana noho ny tendrombohitra Mandalay, izay miala 2.5km avaratra atsinanan'ny lapan'ny mpanjaka, ary dia mbola misy io anarana io hatramin'izao. Ny anarana “Mandalay” dia nosintonina avy amin'ny teny Pali “Mandala”, izay midika hoe “tany lemaka”sy avy amin'ny teny Pali iray koa hoe “Mandare”, izay midika hoe “tany manambina”.
Nanintona izay tia jerijery, mpaka sary ary mpamaham-bolongana ity lanoana ity. Nyi Min San, Mpaka sary/mpamaham-bolongana iray no nanoratra tao amin'ny bolongany:
Niainga avy eny an-tetezan'i Mingalar (lalana faha-73) ny matso ary mamakivaky ny lalana faha-26, mandalo ny trano kelikelya manatrika ny MCDC (Vaomieran'ny fampandrosoana ny tanànan'i Mandalay) Lapan'ny tanàna, mandrapahatongan'ny fiolahana akaikin'ny Hotel Sedona. Avy eo ry zareo dia miodina kamiverina mandrapahatonga eny amin'ny Lapan'ny tanàna. Feno mpaka sary teo an-tetezan'i Mingalar Bridge raha nihazo nankeny izahay. Efa an-jatony mihitsy ry zareo no teny. Nankeo amin'ireo mpaka sary ireo izahay dia samy naka sary. Maro amin'izy ireo no nanao akanjo fotsy sy longyi, hany ka raha tazanin-davitra ry zareo dia tena nangoro-potsy mihitsy. Vao nandray ny fakantsariko aho dia tsy nahay niato amin'ny fakana sary…..
Mg Hla, mpamaham-bolongana hafa avy ao Mandalay:
…. (Taloha) Tamin'ny fankalazana ny faha-100 taona dia natao ho fety manerana ny firenena ny korana fa tamin'ity faha-150 taona ity kosa dia natao teo amin'ny sehatry ny faritany ihany ny lanonana. Tsy fantatro ny ora hanombohan'ny fety koa rehefa nanontany ny mpanao gazety aho dia novaliany hoe amin'ny valo ora maraina. Nangataka tapak'andro tsy iasana aho ka nankeny haka sary. Nandritra ny fotoam-pankalazana dia nampiasaina araka ny fanaovana azy fahagola ny soavaly tena izy, fa nosoloina elefanta kyauk-se (saribakolin'elefanta iafenan'olona ao anatiny) kosa ny elefanta. Tamin'nyvoalohany dia nikasa hampiasa elefanta tena izy ry zareo saingy tsy tian'izy ireo fandrao mikorapaky ny tahotra ka mandositra ny elefanta raha mahita ny hamaroan'ny olona, dia izay no nampiasany saribakolin'elefanta.
Nadikan'ny mpanoratra ny lahatsoratra notsongaina avy tamin'iNyi Min San sy Mg Hla. Avy tamin'ny teny Birmana no nandikana ny lahatsoratra.